‘महामारी नियन्त्रणमा गएको टोलीलाई सुदूपश्चिमबाट फर्काइयो, प्रदेशका नाममा रजौटा प्रवृत्ति ’ (भिडियो) – Nepal Press
‘महामारी नियन्त्रणमा गएको टोलीलाई सुदूपश्चिमबाट फर्काइयो, प्रदेशका नाममा रजौटा प्रवृत्ति ’ (भिडियो)
२०७८ जेठ २ गते १५:०८
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्‍चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशका नाममा राज्य रजौटाको प्रवृत्ति देखाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । मानवीय संकटका बेला एकजुट भएर काम गर्नुपर्नेमा कतिपयले राजनीति गर्न खोजेको ओलीले बताएका छन् ।
ओलीले सुदूरपश्चिमले संघको सहयोग नलिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
ओलीले भने, ‘यस्तोमा राजनीति गर्न छोड्नुहोस् । प्रदेश नम्बर ७ को सरकार, यहाँबाट के स्थिति छ भनेर मान्छे पठाउँदा हामीलाई चाहिदैन भनेर फिर्ता पठाउँछ । केन्द्रबाट मन्त्रीलाई अनुगमन गर्न पठाउँदा, सरसल्लाह गर्न पठाउँदा मान्छे फिर्ता पठाउँछ । जाउँ हाम्लाई चाहिदैन केही पनि । यो भन्दा के हुन्छ ? प्रदेशका नाममा, केका नाममा राज्य रजौटा भएर चलाउने प्रवृत्तिहरु । मानविय संकटका बेला रजौटे प्रवृत्ति उचित हुनसक्छ र ? ‘
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नै कोल्याप्स भयो भनिएकोमा आपत्ती जनाएका छन् । स्वास्थ्य प्रणालीमा देखिएका केही समस्यालाई लिएर सिंगो स्वास्थ्य प्रणाली नै कोल्याब्स भयो भन्न नमिल्ने तर्क प्रधानमन्त्रीको छ ।
महामारीको पूर्वतयारी कुनै पनि मुलुकमा नहुने भन्दै ओलीले सरकारले कोभिड नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गरेको बताए ।
ओलीले भने, ‘सरकारका प्रयासहरुमा स्वास्थ्य क्षेत्र, निजी व्यवसायीक क्षेत्र गैह सरकारी संस्थाले, गैर आवासीय प्रतिनिधि लगायत सबैले आ-आफ्ना ठाउँबाट व्यवस्थित र संगठित ढंगले सहयोग गर्न आग्रह गर्छु । छरपस्ट ढंगले होइन । ‘
प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमा राख्न र प्रचारात्मकभन्दा पनि वास्तविक परोपकारी र मानवीय सहयोगलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।
प्रकाशित: २०७८ जेठ २ गते १५:०८
2 thoughts on “‘महामारी नियन्त्रणमा गएको टोलीलाई सुदूपश्चिमबाट फर्काइयो, प्रदेशका नाममा रजौटा प्रवृत्ति ’ (भिडियो)”
Jiwan Thakulla says:
राज्य खारेज गरि, रजौटा लाईइ बिदाई गरौ!!!
राजन अर्याल says:
खड्ग ओलीलाई जस्तो झुट बोल्न अरु कसलाई आउला? देशको राजधानी रहेको बाग्मती, तिम्रो शेरधन वाला १ नम्बर र शंकर पोखरेल भएको लुम्बिनीको हालत कसलाई थाहा छैन र!